TALATA 16 OKTOBRA 2018
SAMBAVA : Tovolahy iray efa tsy misy aina no azon’ny haraton’ireo mpanjono
Fatina tovolahy vao 28 taona efa tsy miakanjo no azon’ny haraton’ny mpanarato an-dranomasina ny alatsinainy maraina teo, tao Sambava. 22 novembre 2017
Voalaza fa avy aty Antananarivo izy io ary vao herinandro monja no tonga nitady ravinahitra any Sambava nefa izao hita faty izao. Araka ny fampitam-baovao azo dia ny alahady maraina teo no niala tao amin’ny mpampiasa azy ny tovolahy sy ireo namany roa hafa nandeha nijery moraingy. Nipaika ny tamin’ny 7 ora hariva dia gaga ireo mpampiasa azy fa mbola tsy nody ihany ity farany, araka ny fitantaran’izy ireo. Ampitson’iny sendra nidina nanao fisafoana ny lehiben’ny jono sy ny ben’ny tanàna ao Sambava dia nandositra avy hatrany ireo mpanjono noho ny tahotra ka navelan’izy ireo tao anaty rano ny harato.
Nilaza tamin’ireto olona tratra farany kosa ireo tompon’andraiki-panjakana mba hampiakatra ny harato saingy tsy misy azo entina ireo trondro. Niaraka nampiakatra ny harato ireo mpanjono tavela teo ka gaga ihany fa noheverin’ireto fa trondro be no azo. Nilatsaka tao anaty rano ny iray ary taitra raha naharay tongotr’olona ka nikiakiaka. Torak’izany koa ny namany niaraka taminy. Niantso olona teo manodidina ireto farany nanampy azy ireo nampiakatra ny harato sy ilay faty. Taitra avokoa ny rehetra vao nahita izany ary nampandre ny mpitsabo sy mpitandro filaminana avy hatrany ny ben’ny tanàna.
Raha vao nojerena ny razana dia tsy nisy fitafiana intsony ary naratra teo amin’ny lohany, araka ny fampitam-baovao voaray hatrany. Nilaza kosa ny mpitsabo nizaha ny razana fa mety ny alahady hariva no namonoana io tovolahy io ary novonoina tamin’ny toeran-kafa avy eo nariana tao anaty ranomasina. Ahiana ho vono olona tanteraka no nahazo ity tovolahy ity ary efa miroso amin’ny fanadihadiana ny mpitandro filaminana any an-toerana ankehitriny.
Afak’omaly io ihany dia olona iray no notazomina vonjimaika ao amin’ny biraon’ny Polisy ao Sambava. Voalaza fa lehilahy mpiara-miasa aminy amin’io toerana fiasany io ihany no nosamborina atao fanadihadiana ankehitriny. Raha ny vaovao voaray farany, omaly dia mbola voatazona am-ponja ihany io lehilahy namany ahiana ho nahavanon-doza io. Varotra kilarinety sy Eskimo mandehandeha no asan’ilay tovolahy hita faty tao Ambodisatrana ity, raha ny vaovao voaray.
Namidy teny an-tsena ireo trondro niaraka tamin’ilay faty
Na efa nosakanan’ny lehiben’ny jono ny hamarotana ireo trondro azon’ny mpanarato niaraka tamin’ilay faty dia mbola namidin’ireo mpanarato teny an-tsena ihany. Niteraka resa-be tao an-toerana izany hatramin’ny omaly maraina satria zavatra tsy azo atao izany fa tokony nariana ireo trondro ka mitaky fanazavana avy amin’ireo tompon’andraikitra manokana amin’izany ny mponina. Manoloana izany, rehefa nanontaniana ny sasany tamin’ireo mpanjono tratra nandritra ny fisafoana nataon’ny Lehiben’ny jono sy ny ben’ny tanàna teny an-toerana dia nifanilika izy ireo fa tsy tompon’ny harato fa mpikarama fotsiny izy ireo.
Hiara-dia sy hampandany ny kandidà Andry Rajoelina n°13 DEPIOTE HARIJAONA RANDRIARIAMALALA (187) 11 octobre 2018 Napetaka tao amin’ny toeran’ny kandida faha-13 ny afisin’ny faha-14 FANAHINIANA SA TSY FAHAMATORANA ? (186) 11 octobre 2018 Votsotra ny menoty rehetra natao taminy BEBETO JIOLAHY RAINDAHINY AO TOAMASINA (176) 13 octobre 2018 Nandresy lahatra ny mponin’Itasy FILOHAN’NY ANTOKO MMM – FREEDOM - MAITSO (118) 15 octobre 2018 Nisy nikasa hanakantsakana ny fandalovan’ny kandidà Andry Rajoelina NOSY BE (114) 15 octobre 2018 Lehilahy miisa 3 no voasambotry ny zandary VONO OLONA FENO HABIBIANA TENY TANJOMBATO (112) 13 octobre 2018